AS ROMA VS AC MILAN: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan! – Gool FM
(Roma) 12 Dis 2016 – Waxaa caawa kulanka ugu adag todobaadka 15-aad ee horyaalka Talyaaniga kaasoo ay ku ballansan yihiin kooxaha AS Roma vs AC Milan, kulan ay saxaafaddu ku tilmaamayso midkii lagu go’aamin lahaa kooxda loo arki kari Anti-Juve.
Dhanka Roma: Wararkii ugu dambeeyay ee kulankan la xiriira wuxuu sheegayaa in Francesco Totti uu seegayo ciyaartan, waxaa sidoo kale laba kulan oo ganaax ah loo jaray Strootman oo anshax xumo ku kacay kulanki Derby della Capitale, waxaa soo kabtay Bruno Peres oo ay jugi kasoo gaartey kulankii Europa League. Emerson iyo Rudiger ayaa dadabyada ilaalinaya. El Shaarawy, Nainggolan iyo Perotti ayaa ka dambeeya Dzeko.
Dhanka Milan: Bonaventura iyo Bacca ayaa kulankan uga maqan jugo ay qabaan oo aysan kasoo kabanin. Montella ayaa sidaa darteed khad dhexe oo kab kab ah ka sameeynaya Bertolacci iyo Pasalic oo bedelaya Kucka iyo Bona oo maqan. Honda ayay u badan tahay inuu bedelo Niang oo aan loo bogsanayn maalmihii ugu dambeeyay.
Szczesny 1 99 Donnarumma
Rüdiger 2 20 Abate
Emerson 33 2 De Sciglio
Strootman 6 73 Locatelli
Manolas 44 29 Paletta
Fazio 20 13 Romagnoli
Perotti 8 80 Pasalic
De Rossi 16 0 Bonaventura
Dzeko 9 9 Lapadula
Nainggolan 4 8 Suso
El Shaarawy 92 11 Niang
Alisson 19 1 Gabriel
Bruno Peres 13 35 Plizzari
Vermaelen 15 15 Gustavo Gómez
Gerson 30 4 Ely
Juan Jesus 0 21 Vangioni
Mário Rui 21 16 Poli
Seck 17 91 Bertolacci
Totti 10 23 Sosa
Iturbe 7 10 Honda
Florenzi, Paredes, Sala
Bacca, Calabria, Mati Fernandez, Montolivo